Toamasina: lehilahy roa matin’ny fitsaram-bahoaka | NewsMada
Toamasina: lehilahy roa matin’ny fitsaram-bahoaka
Maty tsy tra-drano ireo lehilahy roa niharan’ny fitsaram-bahoaka tany Toamasina. Tratran’ny olona namaky trano sy nanendaka izy ireo. Tsy namelan’ny olona raha tsy tapitra ny ainy.
Faritra mena tanteraka ny ao Ambalamanasy sy ny eo Ankirihiry manoloana ireo trano fandihizana roa mifanila tsy lavitry ny Bazary may. Nitrangana fitsaram-bahoaka indray tany an-toerana, ny asabotsy maraina teo, ka maty tsy tra-drano ny iray raha mbola avotry ny polisin’ny Fip avy any Ankirihiry kosa ny faharoa. Raha ny fanadihadina, nisy vaky trano fivarotana zava-pisotro tao an-toerana, ny alin’ny zoma 21 septambra. Ny maraina, nisy nahita nivarotra ireo entana very tamin’ity trano fisotroana ity ary natao ny fanaraha-dia ka tratra tamin’ny tranon’olona mpivady ireo entana ireo. Vokatr’ izay, tsy niandry ela ny fokonolona fa nidaroka sy namono avy hatrany ireto mpivady ireto. Ilay lehilahy no tena nifandrotehan’ny fokonolona novonoina ary tena maty tsy tra-drano.
Ny faharoa kosa, ny alin’ny alakamisy 20 septambra teo tao Mangarivotra, eo amin’ny lakandranokely tsy lavitry ny trano fandihizana roa mifanila ao Bazary may Ankirihiry.
Tovolahy vao nanendaka finday tamina mpivarotena iray ity niharan’ny fitsaram-bahoaka ary tsy namelan’ ireo olona tao amin’ny trano fandihizana roa ireo raha tsy tapitra ny ainy. Tsy niandry ela kosa taorian’ io, efa noraisin’ny havany ny fatin’ ilay tovolahy mpanendaka ity, raha mbola tsy nisy naka kosa ny iray ao amin’ny tranom-patin’ny Hopitalibe avy tao Ambalamanasy.
Ity trangana fitsaram-bahoaka ity izay tsy voatana mihitsy raha ny any Toamasina. Nisy fotoana tena nampirongatra azy, ary nilamindamina avy eo. Izao niverina indray izany, porofo ity olona roa indray novonoin’ny olona ity. Mbola sarotra ny hifehy ny tranga. Endriky ny krizy sy ny tsy fahatokisan’ny olona ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ny raharaha. Tsy misy azon’ny mpitandro filaminana atao afa-tsy ny manao famotorana ihany. Mijanona eo ny raharaha.